Dowlada oo faafaahin ka bixisay weerarkii maanta ka dhacay Muqdisho. – Hornafrik Media Network
Dowlada oo faafaahin ka bixisay weerarkii maanta ka dhacay Muqdisho.
By HornAfrik	 On Jul 7, 2018
Hornafrik-Wasiirka Wasaaradda Warfaafinta, Dhaqanka iyo Dalxiiska ee Xukuumadda Soomaaliya Mudane Daahir Maxamuud Geelle ayaa sheegay in gebi ahaanba howlgalkii Al-Shabaab ay ku soo qaadeen xarunta Wasaaradda Arrimaha gudaha, oo u dhaw Taallada Sayidka, in la soo afjaray.
Wasiirka ayaa hoosta ka xariiqay in la laayay dhamaan kooxdii weerarka soo qaaday, isla markaana ciidamada amaanka ay ku guuleysteen inay badbaadiyeen dadkii ku jiray gudaha xarunta Wasaaradda Arrimaha gudaha, iyagoo saacado kooban ku soo afjaray howlgalka.
Weerarki qaraxyada ku bilowday oo goordhaw la soo afjaray.
Xukuumadda oo balan qaaday daryeelka dhaawacyadi Shalay.